Ukusebenzisana kweziyobisi phakathi kweBenadryl kunye nehydroxyzine
Le ngxelo ibonisa ukusebenzisana kweziyobisi kwezi zi-2 zilandelayo:
ndineqhuma ezimpundu zam
Unxibelelwano phakathi kwamayeza akho
Isebenza kwi: Benadryl (diphenhydramine) kunye nehydroxyzine
Sebenzisa i-diphenhydrAMINE kunye ne-hydrOXYzine kunokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga ezinje ukozela, ukungaboni kakuhle, umlomo owomileyo, ukunganyamezelani kobushushu, ukugungxula, ukubila okunciphileyo, ubunzima bokuchama, ukukrala esiswini, ukuqhina, ukubetha kwentliziyo ngokungaqhelekanga, ukudideka kunye neengxaki zememori. Iziphumo ebezingalindelekanga zinokubakho kubantu abadala okanye kwabo banesimo esiphazamisayo. Kuya kufuneka uphephe okanye unciphise ukusetyenziswa kotywala ngelixa unyangwa ngala mayeza. Kulumkele nezinto ezifuna ukuphapha ngokwasengqondweni njengokuqhuba okanye ukusebenzisa oomatshini abayingozi de ube uyazi indlela ekuchaphazela ngayo amayeza. Thetha nogqirha wakho ukuba unemibuzo okanye unenkxalabo. Kubalulekile ukuxelela ugqirha wakho ngawo onke amanye amayeza owasebenzisayo, kubandakanya iivithamini kunye namayeza. Sukuyeka ukusebenzisa nawaphi na amayeza ngaphandle kokuqala uthethe nogqirha wakho.
Tshintshela kwidatha yokunxibelelana kwengcali
Ukudibana kweziyobisi kunye nokutya
Isebenza kwi: hydroxyzine
Utywala bunokunyusa iziphumo zenkqubo ye-hydrOXYzine ezinje ngesiyezi, ukozela, kunye nobunzima bokugxila. Abanye abantu banokufumana ukuphazamiseka ekucingeni nasekugwebeni. Kuya kufuneka uphephe okanye unciphise ukusetyenziswa kotywala ngelixa unyangwa ngehydrOXYzine. Sukusebenzisa ngaphezulu kwethamo elicetyiswayo le-hydrOXYzine, kwaye thintela imisebenzi efuna ukuphapha kwengqondo njengokuqhuba okanye ukusebenzisa oomatshini abayingozi de ube uyazi ukuba lichaphazela njani iyeza. Thetha nogqirha wakho okanye usokhemesti ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo.
Izilumkiso eziphindiweyo zonyango
Ukuphindaphindwa konyango kukusetyenziswa kwamayeza angaphezu kwelinye kudidi olunye lwamachiza okanye iklasi yokunyanga ukunyanga imeko efanayo. Oku kunokuba yinjongo kwimeko apho iziyobisi ezinamanyathelo afanayo zisetyenziswa kunye ukubonakalisa isibonelelo sonyango. Isenokuba yinto engenanjongo kwimeko apho isigulana siphathwe ngugqirha ongaphezulu kwesinye, okanye sinemiyalelo ezaliswe ngaphezulu kwekhemesti enye, kwaye inokuba neziphumo ezibi.
Imethylprednisolone 4mg dospak 21's
Ukuphinda kabini ukunyanga
imiphumela yeentsini nicorette
Elona nani liphezulu licetyiswayo lamayeza kwicandelo 'lama-antihistamines' ekufuneka athathwe ngaxeshanye liqhelekile Nye . Uluhlu lwakho lubandakanya Mbini amayeza eqela 'lama-antihistamines':
Phawula: Izibonelelo zokuthatha la manyango amayeza zinokugqitha nayiphi na ingozi enxulunyaniswa nokuphinda kabini unyango. Olu lwazi aluthathi ndawo yokuthetha nogqirha wakho. Soloko ujongana nomboneleli wakho wezempilo ukumisela ukuba ngaba naluphi na uhlengahlengiso kumayeza akho luyafuneka.
Ukwahlukaniswa kokunxibelelana neziyobisi
Olu luhlu lusisikhokelo kuphela. Ukubaluleka kokunxibelelana okuthile kweziyobisi nomntu othile kunzima ukufumanisa. Njalo qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba uqale okanye uyeke nayiphi na iyeza.
Kubaluleke kakhulu eklinikhi. Gwema ukudibanisa; umngcipheko wokunxibelelana ungaphezulu kwesibonelelo.
Ngokuphakathi kuklinikhi ebalulekileyo. Ngokwesiqhelo thintela indibaniselwano; yisebenzise kuphela phantsi kweemeko ezizodwa.
Kubaluleke kakhulu eklinikhi. Nciphisa umngcipheko; vavanya umngcipheko kwaye uthathele ingqalelo elinye ichiza, uthathe amanyathelo okuphepha umngcipheko wokunxibelelana kunye / okanye ukumisela isicwangciso sokubeka esweni.
Akukho lwazi lonxibelelwano olukhoyo.
I-diclofenac sod dr 75 mg ithebhu
ninokuthatha iiasprini kunye neibuprofen kunye
ungaba ngaphezulu kwe-advil
ukutshintsha ukukhanya kwesilingi